9 Aktaro oo Bollywood iyo sida uu ahaa muuqaalkooda markii ay kasoo muuqanaayeen filimkooda ugu horeeyay – Filimside.net
9 Aktaro oo Bollywood iyo sida uu ahaa muuqaalkooda markii ay kasoo muuqanaayeen filimkooda ugu horeeyay
April 15, 2019 Jabriil Abdikadir
Jilayaasha maanta aad arkeyso ayagoo waa weyn oo xidigo ah shalay ayagoo yar yar ayee shirkada Bollywoodka imaadeen aflamtana kaga soo muuqan jireen caruur nimadooda.
Qaab jiliinka ayagoo caruur ah ayee soo galeen maantana waa xidigo waa weyn qaarkoodna Super Stars maqaam weyn leh noqdeen waxaana liiskan kujiraan atirishooyin iyo atoorayaal badan oo aad qaarkod taageere u tahay dabcan.
Halkaan hoose kaga bogo 9-ka jilaa ee caruurnimada jiliinka kasoo bilaaweyn
ninka lagu magacaabo Mr. Perfectionism of bollywood Amir Khan ayaa filim jilista kusoo biiray isagoo aad u yar waxa uuna kasoo muuqday filimka uu iska lahaa adeerkiisa Nasir Hussain ee Yaadon ki Baarat sanadkii 1973 isagoo ka mid ahaa caruurtii yar-yaraa ee filimkaas ku jirayn
qof walba ayaa og inuu Hrithik Roshan kusoo caan baxday filimkii Ka Hoo Na Pyaar Hai sanadkii 2000 laakiin ka hor filimkaas aktarkan waxa uu isagoo 6 jir ah kasoo muuqday filim lagu magacaabo Aap Ke Diwaane iyo filimka kale ee Bhagwaan Dada
Sanjay Dutt isagoo kaliya 12 jir waxa uu door heesaa ku jilay filimka lagu magacaabo Reshma Aur Shera sanadkii 1972
Sridevi xiligii ay yarayd waxa ay kasoo si weyn kaga soo muuqan jirtay filimada Koonfurta iyadoo xitaa halkaas loo bixiyay magaca Babby Sridevi sidoo kale Sridevi waxa ay filimka Julie ku jishay Julie walaasheeda ka yar sanadkii 1975
aktarkan quruxda badan waxa uu waayihiisa jilaanimo kasoo bilaabayn inuu matalo doorka Amir Khan oo yar isagoo door caruurnimo ah ku jilay filimada kala ah Joh Jeeta Woh Sikander iyo Qayamat Se Qayamat Tak
Shahid Kapoor waxay uu ka mid yahay jilaayaasha ugu caansan Bollywood-ka kuwaaso soo galeen bilawgii qarnigaan
Balse Shahid shaqadiisa ugu horeeyay waxa uu bilaabay isagoo aad u dhalin yar isagoo xayeysiin uu sameeyn jiray shirkadaha cabitaanada taasi oo sababtay inuu noqdo mid si loo jeclaado isagoo dhalin yar.
7. Bobby Doel
Jilaaga caanka ah Bobby Deol marki ugu horeysay isagoo yar uu film kasoo muuqdo waxuu ahaa filmkii Dharam Veer ee uu hogaamiye ka ahaa aabihiisa Dharmendra waana mashruuc weyn oo caan ah.
8. Aftab Shivadansi
Waa mid kamid ah atoorayaasha Bollywoodka maanta isagoo xidig caan ah noqday bilawgii qarnigaan magaciisana ku baahay balse awood aanan ku yeelanin Box-office-ka gabi ahaan.
Aftab qaab jiliinka isagoo yar ayuu bilaaway fllmadii uu yaraantiisa kasoo muuqday waxaa kamid ah Mr.India iyo Chaalbaaz oo ay labadaba hogaamiye ka ahed Sridevi.
Atirishada Tabu ayadoo yar ayee bilaawday inee kasoo muuqato filmada waxayna wax ka jishay filmkii Dev Anand hogaamiyaha ka ahaa Hum Najuawaan ayadoo yar ayee gabdhiisa ku jishay